Ny tantarantsika - Shanghai Copak Industry Co., Ltd.
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, natsangana tamin'ny 2015, miaraka amin'ny biraon'ny varotra any Shanghai sy ny ozinina mifandraika amin'izany ao Zhejiang. COPAK dia mpamatsy matihanina amin'ny vokatra ara-tsakafo sy zava-pisotro mahasoa ny Eco: kaopy PET, tavoahangy PET, vilia taratasy, sns.
COPAK dia miezaka ny manavao hatrany ireo vokatra vaovao izay mijanona amin'ny fironana ary manome ny mpanjifa vokatra mora vidy sy avo lenta. Copak dia manome kapoaka PET sy tavoahangy PET amin'ny volavola rehetra, manomboka amin'ny 1oz ka hatramin'ny 32oz, samy madio sy vita pirinty. Amin'ny maha mpiara-miasa maharitra sy mpamatsy stratejika ho an'ny mpanjifanay, manolo-tena izahay hamolavola sy hanamboatra kaopy sy tavoahangy PET azo antoka, mahay sy mahay.
Ny lisitry ny vokatra tsy misy vovoka COPAK dia misy fanariana maro isan-karazany ho an'ny toeram-pivarotana sakafo sy zava-pisotro (trano fisakafoanana, rojom-pisakafoanana haingana, fivarotana kafe, tribon-tsakafo, fivarotana lehibe sns) ary koa ireo mpanjifa tsena marobe. Ireto kapoaka sy tavoahangy ireto dia be mpampiasa amin'ny zava-pisotro mangatsiaka, zava-pisotro, kafe ranomandry, voasarimakirana, dite bubble / buba, ronono, ronono mangatsiaka, rano, soda, ranom-boankazo. Saosy sy gilasy.
Nanolotra kaopy sy tavoahangy PET ho an'ny marika malaza maro izahay. Ankehitriny ny vokatray dia hita manerana an'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny COPAK, ny mpanjifa dia azo antoka fa manana safidy azo ianteherana sy azo itokisana ary manolotra iray amin'ireo fotoana fihodinana haingana indrindra amin'ny indostria ho an'ny vokatra azo amidy manokana.
Atrikasa maimaimpoana vovoka
Copak dia mikendry hatrany ny hanangana orinasa maharitra miaraka amin'ny mpanjifa. Ny kalitao no fotony, ny mpanjifa no fotokevitra. Copak dia mandray ny kalitao sy ny serivisy ho fiainana hatrany, manome ny vokatra tsara sy ny serivisy mitsinjo tsara amin'ny fo manontolo. Manana ekipa QC matihanina manokana izahay ary nandalo taratasy fanamarinana FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001.
Empamatsy tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana:
Copak dia miahy ny tontolo iainana ary manaraka tsara ny iraka fiarovana ny tontolo iainana. Ankehitriny, ny vokatra maitso dia misarika ny sain'ny olona. Copak dia afaka mampiasa fitaovana ara-tontolo iainana misimisy kokoa, toy ny RPET sy PLA ary ny taratasy. Mikendry fampandrosoana mirindra eo amin'ny olombelona sy ny natiora isika.
Copak dia tompon'andraikitra amin'ny fanalefahana ny tsindry asa, mandrisika ny mety ho mpiasa, mitarika amin'ny fampandehanana ny tena, ary mandray anjara amin'ny fiaraha-monina. Izahay dia mikendry ny hahatsapa ny fampiraisana mirindra ny orinasa, ny mpiasa ary ny fiaraha-monina.